Warbixin Bileedka Bisha July (2017) Ee Xoolaha Nool
Bil walba Goobjoog Business waxa ay idiin soo gudbisaa warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqa ganacsiga xoolaha ee Soomaaliya sida Lo’da, Geela, iyo Ariga oo ah xoolaha ay Soomaalida dhaqato islamarkaana ay ganacsi ahaan ugu dhoofiso suuqyada caalamka sida Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Waxaan xog la xiriirta qiimaha xoolaha kala duwan ee Soomaaliya ka soo aruurinay suuqyada kala duwan ee Soomaaliya waxaana idin kugu soo gudbinyanaa waxrbixintan hoose.
Hadaba qeybaha soo socda waxaan ku lafa-gureynaa isbadalada ku yimid qiimaha xoolaha nool sida geela, lo’da iyo ariga.
Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in ay leedahay 1/3 geela dunida. Waxaa kale oo lagu tilmaamaa in wadanka Soomaaliya uu yahay dalka ugu xoolaha badan dunida sida laga xiganaya hay’adda FAO oo qaramada midoobey u qaabilsan beeraha iyo cunada.
Bishii lasoo dhaafay ee July, 2017, halka neef ee geela ah waxaa celcelis ahaan la iibinayay 29,451,000 So.Sh halka bishii lasoo dhaafay ee June la iibiniyay 30,333,000 So.Sh. Sidaa darteed qiimaha geela ee bishii lasoo dhaafay waxa uu hoos u dhacay 881,000 So.Sh.
1’dii bisha iyo Todobada maalin ee ku xigtayba neefka geela ah ayaa la iibinayay 30,000,000 So.Sh, halka Sideeddii bisha uu noqday 29,000,000 So.Sh oo macnaheedu tahay in qiimaha neefka geela ah uu hoos u dhacay 1,000,000 So.Sh.
Bishii July ee 2017 qiimaha lagu iibiyo neefka lo’da ah ee dalka ayaa ku bilawday 7,500,000 So.Sh mana jirin wax iska badalay qiimahaas illaa laga soo gaaray 15’kii bisha oo qiimaha neefka lo’da ah uu noqday 8,500,000 So.Sh.
Isla-qiimahaas (8,500,000 So.Sh) ayuu ahaa neefka lo’da ah illaa ay bisha ka dhamaatay.
Bishii July ee 2017 qiimaha lagu iibiyo neefka ariga ah ee dalka ayaa ku bilawday 2,650,000 So.Sh.
8’dii July qiimaha neefka ariga ah sare ayuu u kacay waxuuna noqday 2,725,000 SOS. Waxii ka dambeeyay 8’dii bisha hal mar kaliya ayuu isbadalay qiimaha la iibiyo neefka ariga ah waxuuna noqday 2,750,000 Sh.So, isla qiimahaas ayaa la iibinayay neefka ariga ah tan iyo dhammaadkii bisha.